Dahabshiil oo bank cusub oo caalami ah ka furtay Bossaso. – Radio Daljir
Bossaso Apr, 06 – Shirkadda xawilaadda lacagaha ee Dahabshiil ayaa maanta magaalada Bossaso ka furtay bank cusub oo shirkaddu ku tilmaantay inuu yahay kii ugu horreeyey oo noociisa ah ee laga furo magaalada Bossaso.
Shir ballaaran oo lagu furayey bank cusub oo maanta lagu qabtay hotelka Village ee magaalada Bossaso ayaa waxaa ka qeyb galay wasiirka maaliyadda ee Puntland Faarax Cali Shire, maamulka gobolka Bari, kan degamada Bossaso, ganacsato iyo mas?uuliyiinta shirkadda Dahabshiil iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha dahabshiil Cali Ceelaayo oo ka hadlay furitaankii shirkaasi ayaa sheegey inay filayaan in faa?iido dhaxal-gal ah uu soo kordhin doono bank cusub ee maanta la furay, maadaama ay jiraan dad badan oo lacaga guntiga ku heysta ka dib markii ay waayeen meelay ku aaminaan.
Wasiirka maaliyadda ee Puntlan Faarax Cali Shire oo halkaasi khudbad dheer ka jeediyey ayaa shirkadda dahabshiil uga mahadceliyey furitaanka bangiga cusub iyo guud ahaamba adeegayada ay bulshada u hayaan oo ah buuyiri kuwa la mahadiyey.
Dahabshiil waxay ka mid tahay shirkadaha ugu faca weyn ee ka jira Somaliya gaar ahaan marka laga hadlayo xawilaadda lacagaha.